Ezi afọ ọhụrụ 2017 ọchịchọ Ezi afọ ọhụrụ 2017 ọchịchọ
Ezi afọ ọhụrụ 2017 ọchịchọ
The afọ 2016 -abịa fọrọ nke nta na njedebe. N'afọ a jupụtara jupụtara n'ọṅụ, obi ụtọ na ịhụnanya na-ụfọdụ na n'ihi na ụfọdụ na ọ agwụcha na mwute echeta. Mmadụ gburugburu ụwa na-adị njikere ịnabata New Year nke ga-n'ozuzu ada on 1st January kwa afọ. On a auspicious oge, anyị meworo ndị New Year chọrọ 2017 na a na peeji nke.
The afọ 2016 bụ nnọọ nnukwu maka mba ụfọdụ, na afọ a anyị hụrụ ọhụrụ ọchịchị na-ewere ụgwọ nke na-ewu ewu na mba. Donald trump ghọrọ United States President, na Justin Trudeau wee kpọrọ ọchịchị ndị Canada bụ ole na ole n'ime nnukwu eme nke 2016. -Esi Obi ụtọ na New Year Ozi ịkọrọ na ndị enyi gị, ezinụlọ na ndị ha hụrụ n'anya.
ezi afọ ọhụrụ ozi ọchịchọ
Ndị si n'akụkụ niile nke ụwa usọrọ New Year, na ihe ndị na-agụnye ọchị-jupụta eme otú ahụ dị ka ịgba egwú, abụ abụ, -egwu egwuregwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Night Clubs, Movie Theatres, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Resorts na ntụrụndụ ntụrụndụ jupụtara mmadụ nke afọ, na ndị a bụ ụfọdụ n'ime ma ama ebe ebe zuru okè New Year ememe.
Ọ bụrụ na ị nọ na search of Best Obi ụtọ na New Year 2017 ọchịchọ, ahụ ga-esi malite ibe a nke i nwere ike iso na-elekọta mmadụ media. Dị ka Gregorian kalenda, Ụbọchị Afọ Ọhụrụ malitere na 1st January, na ọ bụ a anaghị ezumike. The New Year chọrọ 2017 na English na Hindi mere dị n'ebe a na-a ilekiri, na ị nwere ike ịkekọrịta.
ezi afọ ọhụrụ messages chọrọ ekele
Mgbe ụbọchị 31st December, a mbụ ọhụrụ ụtụtụ na-eso New Year na ndị niile na-arụsi achọ inwere na unu na-ekele onye ọ bụla ọzọ. Ụfọdụ ndị na-na-arụsi ọrụ ike na-achọ na-ewu ewu New Year 2017 SMS iso na-Whatsapp na Facebook.
New Year chọrọ 2017, SMS na ekele unu
• Oké Nkume a-abịa New Year dị nnọọ ka otú mkpatụ ị bụ. Ka ya bụrụ na gị na ọmarịcha ezinụlọ a nnọọ obi ụtọ na afọ ọhụrụ.
• Icheta ọkụ hugs, Oh ezigbo enyi;
Ebe a na-eme ihe m chọrọ na m nile ịhụnanya nke m zitere na.
Ka gị sorrows mmiri iri na e na-na na ọ dịghị anya mmiri;
-Efu gị na-eziga na ọchịchọ nke Obi ụtọ na New Year
• Dị ka nnụnụ, ka anyị, ahapụ ihe ndị anyị na-adịghị mkpa na-ebu ... iwe n'obi ỌJỌỌ mgbu egwu na-akwa ụta maka. Ndụ Mara mma, Kporie ya. EZI AFỌ ỌHỤRỤ.
• May The Year 2017 Ewetara gị ....
Obi Ụtọ,Ihe ịga nke ọma na jupụtara na Peace,
olileanya na & Anọrị gị Family & Enyi ....
N'ịchọ ị a ... * '* Ezi Afọ Ọhụrụ 2017 *' *
• Ka afọ a na-ewetara ọhụrụ obi ụtọ, ọhụrụ ihe mgbaru ọsọ, ọhụrụ rụzuru na a ọtụtụ ndị ọhụrụ na inspirations na ndụ gị. N'ịchọ ị na-afọ n'ụzọ zuru ezu loaded na obi ụtọ.
• Dị ka afọ ọhụrụ ọhụrụ niile obi ụtọ na ozi ọma, olileanya na-enye ọṅụ spirit-eme egbuke na obi gị ruo mgbe ebighị ebi!
Obi ụtọ na New Year chọrọ 2017
• Ι nwere ike mgbe fοrget gị emeghe Αrms, Υour njikere na-ege ntị Εars, Υour ụdị obi Αnd gị n'anya lοve maka Μe! -Achọ inwere yοu ọkụ hugs Αnd nza nke lοve maka New Υear!
• Little igodo emeghe nnukwu akpọchi;
Simple kwuru gosiri oké echiche;
Ọnụ ọchị gị nwere ike isi gwọọ obi blocks;
Ya mere, nọgide na-amụmụ ọnụ ọchị, ya nkume.
Ezi afọ ọhụrụ 2017!
ezi afọ ọhụrụ messages chọrọ SMS whatsapp fb5
• Dị ka afọ ọhụrụ ọhụrụ niile obi ụtọ na ozi ọma, olileanya na-enye ọṅụ spirit-eme egbuke na obi gị ruo mgbe ebighị ebi! Ezi afọ ọhụrụ!
Ehihie na abalị bụ ọchịchịrị ma ụbọchị na-egbuke egbuke, -gị na isi na obi n'ebe a na nke ahụ dị mma. Adịghị na-mwute dị ka ọ bụ fọrọ nke nta nso. Ee! Anyi na ekwu ihe na-abịa New Year